'नेकपा पार्टी भ्रष्ट्रचारी र गुण्डाहरुको भर्ति केन्द्र जस्तै भयो' : बालकृष्ण ढुङ्गेल (अन्तरवार्ता)
'नेकपा पार्टी भ्रष्ट्रचारी र गुण्डाहरुको भर्ति केन्द्र जस्तै भयो' : बालकृष्ण ढुङ्गेल (अन्तरवार्ता) - Nepal Talk
श्रावण ११ गते, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौ। ओखलढुङ्गाका पूर्व सांसद तथा पूर्व माओवादी नेता हाल नेकपाका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल कुनै समय चर्चाको शिखरमा थिए। अहिले पनि उनको चर्चा र परिचर्चा उस्तै नै छ। दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकार बनेको छ। एक समय जनताले भन्ने गरेका थिए कि देशमा विकास चाहने पार्टी नेकपा नै हो। तर पछिल्लो समय सरकारले गरेको कामप्रती जनता देखी आम नेता कार्यकर्ताहरु समेत सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। के साच्चै नकपाको सरकार नेकपा पार्टी कमजोर भएकै हो ? सरकारले राम्रो सँग काम गर्न नसकेकै हो त? यो प्रश्न फरक प्रतीपक्ष राजनीति दलले मात्र होईन नेकपाकै शिर्ष नेताहरुले पनि उठाँउदै आएका छन्।
सशस्त्र युद्धकालमा स्थानिय भूवन भनिने उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले जेल हालेको थियो। उनि २०७५ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकै दिन राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिएपछि उनी जेल मुक्त भएका थिए। जेलबाट रिहा भएपछि उनको पक्ष र विपक्षमा मत बाँझीएको थियो। धेरै लामो समय पछि नेपालमा ठुलो राजनीति परीवर्तन भयो। पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले पार्टी एकता भएको पनि १४ महिना बिति सकेको छ। सबै जिल्ला तह सम्मको एकता सम्पन्न भएको छ।
सबै जिल्लाहरुको अध्यक्ष र सचिव देखि इन्चार्ज सहइन्चार्जको जिम्मेवारी टुङ्गाएको छ। आर्दशका नेताका रुपमा चिरपरिचित नेता हुन् बालकृष्ण ढुङ्गेल तर उनलाई पार्टीले कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन अहिले उनी जिम्मेवारी विहिन भएका छन्। उनै ढुङ्गेल यति बेला के गरि रहेका होलान् ? वर्तमान राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो होला ? यसै विषयवस्तुलाई केन्द्रीत गरेर नेपालटकका सम्पादक आनन्द पुन साथमा पत्रकार भुमिराज अधिकारीले नेकपाका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत छ ढुङ्गेलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
उनले बुँदागत रुपमा भनेका छन्
१. पूर्व माओवादी र पुर्व एमालेबिच भएको पार्टी एकता जाहेज हो तर नाम मात्रको पार्टी एकता भयो।
२ं पार्टी एकता सामुहीक भन्दा पनि ब्यक्तीवादी भयो, ब्यक्तीको मात्र हावी भयो।
३.सरकार र पार्टीको कार्यशैली गलत छ , बेलैमा सच्चिनुपर्छ । यदि नसुध्रिने हो भने ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्छ।
४. पार्टी र सरकारको निर्णयहरु यस्तै जनताको विरोधी हुने हो भने सरकार पाँच वर्ष पनि टिक्न सक्दैन।
५. पार्टीमा दुई अध्यक्ष होईन एक अध्यक्ष हुनुपर्छ , ओली र प्रचण्ड दुई मध्ये एकले सरकार चलाउने र एकले पार्टी चलाउनु पर्छ।
६.अकुत सम्पत्ति कमाएका नेताहरुले एक दिन देश छोड्न बाध्य हुन्छन्।
७ं. ओली प्रचण्ड लगाएत सबैको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिनुपर्छ।
८. वर्तमान सरकारले भ्रष्ट्रचारीहरुलाई नै संरक्षण गरि रहेको छ।
९. म न्यायलयबाट बलात्कृत पात्र हुँ। न्यायलयले न्याय दिएन।
१०.पार्टीमा दिपक मनाङे जस्ता गुण्डाहरु प्रवेश गराउनु ठिक होईन, नेकपा पार्टी भ्रष्ट्रचारी र गुण्डाहरुको भर्ति केन्द्र जस्तै भयो।
यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर बालकृष्ण ढुङ्गेलले ओली प्रण्चण्डको खोले यस्तो भित्रि डरलाग्दो रहस्य हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)